dhabarka kaa cusleeyay.
Miyaannaan kor yeelin magacaaga (xusiddaada).
Cidhiidhina waxaa ku dhaw fudayd (faraj).
Ee markaad Salaadda dhammayso isku dhib (Samo fal).
Eebana (Khayr) ka rajee.
Eebe wuxuu ka dhaartay Tiinka iyo Zeytuunka.
Iyo Dhuuri Siina.
Iyo Magaaladan Aaminka ah (Maka).
Ee waxaana ku abuurray Dadka Muuqal toosan.
Kaddibna waxaan u celinaynaa hoos (gabow dartiis).
Hase yeeshee kuwa rumeeyey xaqa camalwanaagsanna falay, waxay mudan Ajri aan go'aynin.
Ee Maxaa Gaalada u sababay beeninta Qiyaamada intaas ka dib.
Miyuusan Eebe ahayn kan ugu xukun wanaagsan. (Eebaa xukun wanagsan).
Wax ku akhri Nabiyow Magaca Eebe ee abuuray (khaliqiga).
Dadkana baray waxayna aqoonin.
Saas ma aha ee Dadku (Gaaladu) waa gudbeen.
Markuu isku ogaaday Hodontinnimo.
Eebaha xaggiisaase loo noqon.
Ka warrama midka ka reebaya.
Addoon (Eebe) oo tukan Salaadda.
Bal ka warrama hadduu ka laga reebi hanuunsanyahay (waa Nabiga).
Ama uu fari Eeba ka yaabid.